Somali (Af-Soomaali) | The Magic Paintbrush(Buraashka Riinjiga Indho Sarcaadka) | WorldStories
Buraashka Riinjiga Indho Sarcaadka
Sheekada qoomkii Shiineeska
Hadda ka hor waxaa jiri jiray nin yar oo la yiraahdo Ma Liang. Wuxuu ahaa faqiir oo naxariis leh oo jacel inuu sawiro wax badan ee inuu ku sameeyo sawiro meel walba. Hal habeen, wuxuu ku riyooday in nin waayeel ah siiyay buraashka sawirka indho sarcaadka oo weydiiyay inuu isticmaalo si ay u caawiso dadka saboolka ah. Markii uu ka kacay, wuxuu ku arkay buraashka riinjiga indho sarcaadka miiskiisa.
Ka bilow maalintaas, wuxuu isicmalaa buraashka riinjiga marwalba oo dadka saboolka ah caawin u baahanyihiin. Markii uu arko inaysan dadka biyo haysan ay ku isticmaalaan goobaha, wuxuu sawiraa wabi oo wabigii ayaa soo noolaaday. Dadkii waxay ka keensan karaan biyo wabiga ee goobtooda si ay uga caawiso in badarkooda beertaan. Markii uu arko in beeraleyda aadka u shaqeeyo inay la dhibaatoonayaan inay quudiyaan qoysaskooda, wuxuu sawiraa cunto badan si ay u cunaan iyaga. Dhawaan dad badan wax ayay ka ogyihiin buraashka riinjiga indho sarcaadka oo aad ayay ugu faraxsanaayeen Ma Liang.
Laakin tuulada, halkaas waxaa ku nool nin taajir ah kaas oo ugu tallogalay oo go'aansaday inuu ka xado buraashka riinjiga ninka dhalinyarada ah si markaas isaga isticmaalo si uu u sii taajiro. Marka wuxuu u soo diray shaqaalihiisa guriga Ma Liang si ay uga soo xadaan buraashka riinjiga indho sarcaadka.
Markii uu helay buraashka riinjiga, wuxuu dareemay farxad weyn oo wuxuu casuumay saaxibadiisa inay yimaadaan gurigiisa si markaas u tusiiyo iyaga awoodiisa cusub. Wuxuu sawiray sawiro badan, laakin midkoodna uma soo noolaan. Aad ayuu u xanaaqsanaa in buraashka riinjiga uusan isaga u shaqeyn marka wuxuu usoo diray Ma Liang.
Wuxuu ku yiri wiilka dhalinyarada ah, 'haddii aad ii sawirtid sawirada qaar oo aad ii nooleysid, waan ku xureynayaa.'
Ma Liang muusan rabin inuu caawiyo sida qof xun oo noocaas ah, laakin wuxuu hayay fikrad.
Wuxuu ku yiri ninkii xummaa, 'Maxaad jeclaan laheyd inaan kuu sawiro?'
Ninkii taajirka ahaa ayaa yiri, 'waxaan rabaa buur dahab ah. Waxaan tagayaa halkaas si aan isugu keeno dahab.'
Laakin ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu sawiray marka koowaad bad.
Ninii taajirka ahaa wuu xanaaqay oo ku yiri, 'Maxaad u sawirtay bad? Waxaan rabaa buur dahab ah. Ku sawir si dhaqso ah!'
Marka ninii dhalinyarada ahaa wuxuu sawiray buur dahab ah oo ka fogeyd badda.
Ninka taajirka ah wuxuu yiri, 'Ku sawir markab weyn si dhaqso ah. Waxaan rabaa inaan halkaas aado si aan isugu keeno dahab.'
Ninkii dhalinyarada ahaa si tartiib ah ayuu u dhoolo cadeeyay oo wuxuu sawiray markab weyn. Ninkii taajirka ahaa wuxuu ku booday markabka oo dajiyay inuu raadiyo dahabka laakin markii markabka ku dhaqaaqay bartamaha badda, Ma Liang wuxuu sawiray hir weyn oo baabi'iyay markabka iyo ninkii taajirka ahaa marnaba lagum arag tuulada.
Midaas kadib, ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu kula noolaa qoyskiisa si farxad ah oo u isticmaalay buraashka riinjiga inuu ku caawiyo dadka saboolka ah sida ninkii waayeelka ah weydiiyay inuu sameeyo iyo buraashka riinjiga indho sarcaadka waxaa garanayay oo jeclaa qof walba.